Xiddigaha Ugu Waa Weyn Barcelona Oo Durbaba Ka Soo Horjeestay Macalinka Cusub & Canaantii Ay U Soo Jeediyeen Oo La Soo Bandhigay | Laacib.net
Xiddigaha Ugu Waa Weyn Barcelona Oo Durbaba Ka Soo Horjeestay Macalinka Cusub & Canaantii Ay U Soo Jeediyeen Oo La Soo Bandhigay
January 26, 2020 Balaleti Comments Off on Xiddigaha Ugu Waa Weyn Barcelona Oo Durbaba Ka Soo Horjeestay Macalinka Cusub & Canaantii Ay U Soo Jeediyeen Oo La Soo Bandhigay
Guuldaradii 2-0 ee Barcelona ka soo gaartay Valencia kulankii xalay ee Mestalla Stadium waxay hoosta ka xariiqday isafaham la’aan ka dhaxeysa ciyaartoyda kooxda iyo tababaraha cusub Quique Setien.
Inkastoo tababaraha oo uu wehliyo caawiyihiisa Eder Sarabia ay isku dayeen inay saxaan qaladoodkooda intii ay socotay kulankiii Valencia hadana ciyaartoyda ugu waa weyn kooxda ayaa kulan kooban yeeshay waqtigii nasahada iyagoo ku canaantay tababaraha cusub in taatikadiisa ay dib u dhigeyso kooxda, sida ay xog ku heshay jariirada AS.
Waxay ka cabanayeen in dhibaatada ugu weyn ee Barcelona heysata inay tahay in ciyaartoydooda aysan laheyn agaasin. Hal ciyaaryahan oo aan la magacaabin ayaa yiri :
“Waxay noqon doontaa wax aan suurtogaleynin haddii aan sidaan ku sii socono; waxaan haatan heysanaa ciyaartoy badan oo kubadaka danbeeya bedelkii ay ka horeyn lahaayeen, mana aheyn inay sidaasi dhacdo. Waxaan u baahanahay inaan kubadaha gudaha u riixno, inaan kubada si dhaqso ah u dhaqaajino sababtoo ah wax walba ayaan haatan u sahleynaa Valencia.”
Hadaladaas waxaa la yiri waqti ay ciyaarta aheyd barbaro goolal la’aan ah. Laakiin calaamadaha halista badan waxay cadeeyaan 45tii daqiiqo ee ugu horeysay – Valencia waxay iska qasaarisay rigoore, waxayna garaaceen birta halka Barcelona ay kaliya hal darbo la beegsatay goolka waxayna aheyd laad xor ah uu Messi ku aadiyay gacmaha goolhaye Domenech.
Sida ay qortay jariirada AS jawiga qolka labiska Barcelona ayaa ahaa mid aad u murugeysan ka dib ciyaarta. Inkastoo kooxda ay ciyaarteeda kala furfurtay qeybtii labaad laakiin guuldaradii ku soo gaartay Mestalla waxay fursad u siineysaa Real Madrid inay caawa la wareegto hogaanka horyaalka La Liga.
Waxay guuldarada shaki ka dhex abuurtay ciyaartoyda. Xiddigaha Barcelona ayaa shaki ka qaba qaab ciyaareedka tababare Setien. Waqti ayaa haya tababaraha cusub, iyadoo Barcelona ay haatan u muuqato jiho la’aan.